कोरोनासँग कसरी लड्दैछ कीर्तिपुर - RoadMapNews
RoadMap News	प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक ०६, २०७७ समय: ६:२३:१३
एउटी विवाहित महिलाको विवाहपछिको सोच के हुन्छ ? घरपरिवारको धन्दा सम्हाल्ने, छोराछोरीको हेरविचार गर्ने । लोग्नेलाई अघि बढाउन मद्धत गर्ने । अहिले पनि नेपाली समाजमा विवाहित महिलाको हकमा यहिँ लागू हुन्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा उप–प्रमुख पदमा उम्मेदवार भई जित हासिल गरेकी सरस्वती खड्काको जिवनयात्रा यी माथिका कुनै शब्दहरुसँग मेल खाँदैन । भनौँ, विवाहपछि अन्य महिला घरभित्र व्यस्त हुन्छन् तर, उनी विवाहपछि ठीक उल्टो भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न थालिन् । २ जेठ ०३८ मा रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिकामा जन्मिएका उनी जन्मिएकी सरस्वती स्कूले जीवनदेखि नै हक्कि स्वभावकी । त्यही समयदेखि राजनीतिमा जोडिइन् । उनी कक्षा ६ अध्ययनरत छँदै अनेरास्ववियुुको विद्यार्थीे राजनीतिमा होमिइन् । साथै, रसुवा जिल्लाको दक्षिण भेगको कोषाअध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालने पनि अवसर पाइन् ।
समय एकनासको कहाँ हुन्छ ? नेपाली समाजमा छोरी भएर जन्म लिएपछि एक दिन पराई घर जानैपर्छ । उनी पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकिनन् । संयोग या जे भनौँ, बुहारी बनेपछि बल्ल उनको आफ्नो करिअर भयो । यिनै रसुवाको चेली अहिले कीर्तिपुरको बुहारी बनेकी मात्र छैनन् । कीर्तिपुरबासीको सुख दुखको सारथी पनि बनिरहेकी छिन् । कोरोनाको कहर शुरु भएपछि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ स्थानीय तहले । त्यही स्थानीय तहमध्ये कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख सरस्वती खड्कासँग हामीले सबाल राख्यौं कोरोना कहरसँग कीर्तिपुर नगरपालिका कसरी जुधिरहेको छ त ? ः
गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भयो। त्यसयता म कुनै दिन घर बसेको छैन । हरेक दिन जनताको सेवामा खटिएकी छु । हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिका पुरै खटिएको छ । तर यसरी खट्दाखट्दै पनि नगरवासीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ । सुरुमा प्रभावित जिल्लाबाट आएकाहरुमा देखिएको कोरोना अहिले नगरपालिकाका केही स्थानीयमा समेत देखिन थालेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित संख्या ९० पुगेको छ । अहिलेसम्म २ जनाको मृत्य भएको छ । स्थानीय बासिन्दा र बाहिरबाट आएकाहरूमा कोरोना पुष्टि भएको हो । अधिकांशलाई नगर स्तरबाटै स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरिएको छ । कोही आफैंले पनि चेकअप गर्नुभएको छ । कोरोना कहर शुरु भएर यस्ले सारा विश्वलाई नै पिरोल्यो । यो कहरबाट नेपाल पनि अछुत रहेन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्षमताले भ्याएसम्मका काम गरिरहेका छौं । यो वर्षको बजेट बनाउँदा नै हामीले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट छुट्याएकाले बजेटको अभाव झेल्नु परेको अवस्था छैन । हामीले १ करोेड ५० लाख आकस्मिक कोषमा राखेका थियौं । अहिले यसैबाट चलाइराखेका छौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भोली हुने भयाभह स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै र्कीतिपुर नगरपालिकाको त्रिभुवन विश्वविधालय वायोटेकसँग सहकार्य गरेर पिसिआर ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, त्यो विग्रेको रहेछ पछि हामी आफैले खरिद गरेर आफैँ गर्दै छौं । टियूको रिसर्च सेन्टरको ठीक पारिपट्टीको भवनमा १०० भन्दा बढी शैया क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको थियो । त्यसलाई अहिले आइसोलेसनमा परिमार्जन गरेका छौं । यस्तै हिकास्टमा २० शैया र राराहिलमा १५ शैयाको सञ्चालनमा ल्याएका छौं । ल्यावरोटरी स्कूलमा २० शैयाको आइसोलेसन निर्माण गरेका छन् । यस्का अलवा अब छिट्टै नै हामी आखाँ अस्पतालमा १० शैया र कवर्ड हलमा २५ शैयाको आइसोलेसन निर्माण गर्दै छौ । कीर्तिपुर जनस्वास्थ्य केन्द्रीय कार्यालयमा २०० बेडको आइसोलेसन छ । आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टरमा पनि २० बेडको आइसोलेसन छ ।
संक्रमण नियन्त्रणका प्रयासस्वरूप शंका लागेकालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, पुष्टि भएकालाई आइसोलेसनमा राख्ने र बस्न चाहनेलाई होम आइसोलेसनमा पनि बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हाम्रो सामु थुप्रै चुनौतिहरु छन । ती चुनौतिहरुलाई सामना गर्दै यसको रोकथाम गरि आम जनतालाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्नु हाम्रो पहिलो कर्तब्य हो । यसका लागि आम नागरिकहरुमा सचेतना फैलाउनु, नगरपालिकाभित्र हुने भोजभतेर, भीडभाड,सामुहिक काम, आवत–जावतलाई रोक्नु पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ ।